Zaka tsara : ny marina no manafaka… | NewsMada
Zaka tsara : ny marina no manafaka…
Hatramin’izao, mbola ifandroritana ny marina momba ny “Raharaha 29 marsa 1947“. Manoloana izany, tsy miraika firy na tsy miraharaha ny mpitondra mifandimby. Atao ihany ny atao isan-taona amin’ny hoe hetsika “fankalazana“: fahazarana, fombafomba? Na famalifaliana sy fanarian-dia ihany koa…
Ny tantara toy izay momba ny “Raharaha 29 marsa 1947” indray izao no tsy mampiombona ny sasany. Samy manana ny filazany tsinona, samy mitompo teny fantatra ho hany manana ny marina. Nahoana, ohatra, raha mba manapa-kevitra ny fitondrana amin’izay hahazoana mikaroka sy mamoaka ny tantara iombonana?
Tsy mahamaika na tsy zava-dehibe amin’izao fahasahiranana izao izany? Hahazoana mahalala ny ankehitriny ny tantara: nahoana, ohatra, i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy no toy izao? Avy amin’izany no hanoritana ny hoavy, fa tsy andehanana an-jambany amin’ny kitsapatsapa lava… Manafaka ny marina, ka ahoana àry?